Maxay salka ku haysataa xiisadda ka dex aloosan Britain iyo France? – Idil News
Maxay salka ku haysataa xiisadda ka dex aloosan Britain iyo France?
Posted By: Idil News Staff October 29, 2021
“Kabtanka markabka Cornelis Gert Jan ayaa loogu yeeray in uu yimaado dhageysiga maxkamadda Le Havre bisha August 11, 2022,” ayuu ku xigeenka dacwad oogaha, Cyrille Fournier ku yiri bayaan uu soo saaray.
“Waxa ay u muuqataa in ay tahay isfaham la’aan maamul ama fasiraad ka duwan xeerarka,” ayuu AFP u sheegay Andrew Brown oo ah agaasimaha shirkadda Macduff Shellfish ee fadhigeedu yahay Scotland.
Paris ayaa ka digtay in haddii aan codsiyada shatiga loo oggolaan tobanaan kalluumaysato Faransiis ah, ay iyana marka la gaaro 2-da November mamnuuci doonto doonyaha Britain in ay dekedaha Faransiiska ka soo dejiyaan kalluunka ay soo qabtaan.
Saraakiisha ayaa sidoo kale soo jeediyay in Farance ay sare u qaadi karto qiimaha korontada ee Jersey, oo ah magaalo koronto ahaan ku tiirsan dhul weynaha Faransiiska.